Waxabajjii 5/2018 Magaalaan Bishooftuu Muddama keessa jirti. Sabaabaan isaa maqaa Walga’ii Uummataa jedhuun – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaxabajjii 5/2018 Magaalaan Bishooftuu Muddama keessa jirti. Sabaabaan isaa maqaa Walga’ii Uummataa jedhuun
Waxabajjii 5/2018 Magaalaan Bishooftuu Muddama keessa jirti. Sabaabaan isaa maqaa Walga’ii Uummataa jedhuun galma Aadaa Magaalaa Bishooftuu Keessa jirutti Walgayiin waamamee irratti Uummatni Oromoofi Qeerroon dargaggootni Oromoo gaaffii gaafatamaa tureefi jiruuf deebii isaa gaafatachuuf kan bahee
.Angawoota OPDO keessa kanneen akka Adde Xaayibaa kan irratti argaman kana irratti Qeerroon Dargaggootni Oromoo hedduun akka galma walga’ichaatti ol hin seenee ittifamuun mirkanaa’eera. Uummatni fi Qeerroon seenaan immoo gaaffii keenyaaf deebiin nuuf haa kennamuu jechuun waltajjiicha muddan keessattuu Gaaffiin uummatni kaase:
2. Angawootni Mootummaa ajaja dabarsuun uummata keenya ficisiisa turaniifi jiran aangoo irraa kaafamuun seeratti nuuf haa dhiyaatani.
3. Saamichi lafaa kallattii hedduun aangawoota dhuunfaa hanga investeroota mootummaan bobbaaseefi maqaa Liiziin nu duraa saamamee atattamaan nuuf haa deebi’uu, qaamotni saamicha lafaa babaldhisaan seeratti nuuf haa dhiyaatan.
4. Gaaffii mirgaa abbaa biyyummaafi bilisummaa gaafachaa jiruuf deebiin nuuf haa kennamu, kanneen jedhu kan ofkeessa qabuun uummatni aangawoota wayyaanee OPDO walgayicha gaggeessuuf argaman muddee qabee jira. Gabaasaa Qeerroo Bishoofturraa!!
Gabaasaa dabalataan walitti deebina.
Land grabbing is still well and alive in Oromia! While people are under state of emergency TPLF is grabbing oromo farmers’ land. – https://t.co/saOcPtKj4X pic.twitter.com/cmZMZE99i2
Rakkoo saamichaa lafaa Magaalaa Bishooftuu keessaatti babaldhachuu waliin walqabatee uummatni Oromoo Magaalaa bishooftuufi naannawaa ishee jiraatu abbaan – https://t.co/agirYyz5Mq pic.twitter.com/ZUjHia0D4U